VHS anwuola, kwuo ezigbo | Akụkọ akụrụngwa
VHS anwuola, kwuo ya
VHS, nke akpọrọ "Beta Killer" nwụrụ na ịka nká. Na nke a dee, anyị chọrọ icheta na plastic katrij na magnetik teepu na ọtụtụ ezi oge nyere anyị. VHS ekwuputala ọnwụ ya ụbọchị ndị a site na ofufe ụlọ ọrụ ikpeazụ gara n'ihu na-arụpụta ndị a kediegwu nwa ngwaọrụ ndị na-enweghị onye ma ọ bụ karịa n'ụlọ? Ọ bụ usoro mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị ewu ewu n'oge ahụ, ọ nweghịkwa ụkọ ihe nkiri ịzụta. Agbanyeghị, afọ dijitalụ (DVD izizi) na gụgharia na-egbu ya. Zuo ike VHS.
Funai Electronics bụ ụlọ ọrụ na-ere ngwaọrụ ndị a kemgbe 1983, ma kwụsịkwa ya. Ọ bụghịzi ụlọ ọrụ ikpeazụ na ụwa gara n'ihu na-arụpụta ngwaọrụ ndị a, ọ gafeela. Weebụsaịtị Nikkei ka kọrọ na Funai Electronics ka rụchara arụpụta VHS kachasị ọhụrụ na ahịa. Companylọ ọrụ a abụghị naanị ndị na-egwu egwuregwu, kamakwa ndị ndekọ. N'akapụrụ Sharp, Tosiba, Denon na Sanyo n'onwe ha, ụdị VHS ndị a ma ama nke oge gara aga. A na-ele usoro ọdịyo a anya dị ka ihe ochie maka ogologo oge, mana obere oghere a ka dị na Funai Electronics, ụlọ ọrụ Japan nke mechara ọrụ ahụ.
Companylọ ọrụ a rụpụtara nde mmadụ VHS nde 15 kwa afọ na oge kachasị, ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ a belatalarị na 750.000 nkeji na 2015 (nke na-adịchaghị ntakịrị, Windows Phone na-ere otu ma ọ bụ obere). Isi ihe mere iji kwụsị imepụta ha bụ enweghị akụrụngwa maka owuwu ha. Anyị anaghị agọnahụ na a ka ga-achọ maka ngwaọrụ ndị a, mana anyị ga-edozi ndị nwere nkwarụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga n'ihu na-egwu VHS n'oge na-adịghị anya. Ejiri usoro VHS (Video Home System) bido na 1976, nke JVC nwere, nke na-ama aka Sony's Betamax, ma tinye ya ka azụmaahịa azụmaahịa site na nnwere onwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » VHS anwuola, kwuo ya
Chekwaa ego site na iji usoro ọgụgụ isi
Ahịa oge ezumike kụrụ ụlọ ahịa PlayStation